လေနုအေး: သားနှင့် ထူးဆန်းသော မြန်မာဝေါဟာရများ
နှပ်ချေးပြန်ထည့်မယ်….ကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုပေါလိုရာ ဆွဲတွေးရရင် ဒါတော်လှန်ရေးဗီဇပါတာဘဲ။
အမ သားလေးက တမင်ပြောတာနေမှာပါ.. သူ့ကို ချစ်စေချင်လို့လေ..
သားလေးက ချစ်စရာလေး နေမှာပဲနော်..။
တန်ခူးရေ.. သားလေးက ချစ်စရာလေးနော်။ စကားပြောတတ်ခါစ ကလေးတွေ မပီကလာ ပီကလာ စကားပြောရင် အရမ်းအသည်းယားဖို့ကောင်းတယ်။ သူတုိ့လည်း စကားကို ၀ါကျမှန်မှန် အသုံးမှန်မှန် ဘယ်လို သုံးမရလဲဆိုတာ မသိသေးတော့ သူသိသလောက်လေး သုံးတာကပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီ။ အဖေရော အမေရော စိတ်ရှည်ရှည်သင်ပြပေးနေတော့ သိပ်မကြာခင် ကောင်းကောင်းပြောတတ်သွားမှာပါ။
ဒါမျိုးလေးတွေ များများလုပ်ပါ မတန်ခူးရဲ့
ကလေးလေးက ချစ်စရာလေး နေမှာနော်း-)
ခလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်း အပြင်မှာတွေ့ ရင်း ပါးလေးကို ချိုက်ဝင်သွားအောင် နမ်းပစ်မိမယ်ထင်တယ် ဟားဟား ကျနော်က ခလေးချစ်တက်တယ်ဗျ ။ သားလေးက စကားပြောတာလေးက တယ်ထူးဆန်းပါလားး
“ရေသေးသေးလေးသောက်မယ်” တဲ့ အခုမှပဲကြားဖူးတော့တယ် ။ ဟီးး ကောင်မလေးက ချစ်စရာကောင်းမှန်းတော့ သူသိသားး လူလည်ကလေးး :P ။
“ဖေဖေ့စကား အလေးထား၊ မေမေ့စကား သားလေးစား” တဲ့လား...။
တန်ခူး သားလေးက လူတတ်ကလေးဘဲ...။
ကျန်းမာပြီး လိမ္မာရေးခြားရှိတဲ့ အသိဥာဏ်ပညာ ထူးချွန် ထက်မြက်တဲ့ သားကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နော်...။
ကိုယ့်သားမိုလို့ လားတော့မသိဘူးမြတ်နိုးရေ…ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာ သားလေးက
ဒါပေမယ့် ရိုးအီသွားမှာကြောက်လို့ …ခုလိုအားပေးရင် နောက်ရေးမှာပေါ့….
ချစ်စရာ အရွယ်လေးမို့ ထင်ပါရဲ့ကောင်းကင်ကိုရေ….
ပေးတတ်ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ သက်ဝေရေ….
သားလေးက တို့ အတွက်တော့ ဒီလောကမှာ ချစ်စရာ အကောင်းဆုံးလူသားလေးပေါ့ အိမ့်ရယ်…..
အမတို့မိသားစုလေးက ပျော်စရာလေးနော် ..